विधयेकमा कांग्रेसको समर्थन, नेकपाको संशोधन ! – Sagarmatha Online News Portal
विधयेकमा कांग्रेसको समर्थन, नेकपाको संशोधन !
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू सरकारले ल्याएका विधेयकहरू केलाएर त्यसमा संशोधन हाल्नमा समेत अल्छि देखिएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो कारागार विधेयक, २०७६ ।
२१ फागुनमा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले कारागार विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित र्गयो । प्रस्ताव पारित भएको ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरिसक्नु पर्दछ । तर यो विधेयकमाथि कांग्रेसका कुनै पनि सांसदले संशोधन दर्ता गरेनन् । सरकार र संसदका गतिविधि नियाल्न भनेर कांग्रेसले छाया सरकार र छाया मिनिसंसदको अभ्यास पनि गरेको छ । तर उसले यो विधेयकमा सरकारले जे ल्यायो, त्यसैमा कांग्रेसले आँखा चिम्लेर समर्थन र्गयो ।
कारागारसम्बन्धी विधेयक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा लगेकाले यसबारे सबैभन्दा बढी चासो छाया सरकारको गृहमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई हुनुपर्ने हो । तर पटकपटक सांसद भइसकेका उनले विधेयक आएकै चाल पाएनन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको भनाइले पनि कांग्रेसले पत्तै नपाएको पुष्टि हुन्छ । कांग्रेसको संशोधन किन नपरेको भने प्रश्नमा उनले भने, ‘कारागार विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने भनेको हो तर, के भयो बुझ्छु ।’ कुनकुन विषयमा संशोधन हाल्ने तयारी थियो भन्ने विषय भने उनले प्रस्ट पार्न चाहेनन् ।